स्वास्थ्य /जिबनशैली – Eps Sathi
दक्षिण कोरियामा कोरोनाको 'ओमिक्रोन' भेरियन्ट भैलिएसँगै यहाँ कोरोनाका दैनिक संक्रमित संख्याले नयाँ नयाँ रेकर्ड बनाइरहेका छन। बुधवार कोरियामा पहिलो पटक दैनिक संक्रमितहरुको संख्या २० हजार नाघेको छ। बुधवारको यो संख्या कोरियामा २ बर्ष अघि पहिलो पटक कोरोना देखा परे यताकै सबैभन्दा धेरै हो। कोरोनाको 'ओमिक्रोन' भेरियन्टका कारण संक्रमण तिब्र रुपमा फैलिरहेको बताइएको छ। बुधबार कोरियामा २० हजार २ सय ७० जना संक्रमित थपिएका हुन। यसमध्ये २० हजार १ सय ११ जना स्थानिय संक्रमित हुन भने बाँकी बिदेशबाट आएकामा भएको संक्रमण हो। यो सँगै कोरियामा कुल संक्रमितहरुको संख्या ८ लाख ८४ हजार ३ सय १० पुगेको कोरिया रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम एजेन्सी 'केडिसिए' ले जानकारी दिएको छ। कोरोना संक्रमण तिब्र गतिमा फैलिए तापनि यसबाट सिकिस्त हुने बिरामीहरुको संख्या भने खासै बढेको पाइएको छैन। बुधवार कोरोनाबाट सिकिस्त हुने बिरामीहरु
बिवाह अघि दुब्ला पातला रहेका अघिकांश युव'तिहरु विवाह पछि माेटाउँछन। आखिर किन त ? याे विषयमा हामिलाई थाहा हुदैन तर खुल्दुली लाग्ने गर्छ। यहि खुलदुली हटाउनका लागी याे विषयमा थुप्रै अ'नुसन्धान भएकाे छ। विवाहकाे ५ वर्ष भित्र करिब ८२ प्रतिशत जाेडिकाे ताैल ५ देखि १० किलाे सम्म बढ्ने फेमली सिस्टम एण्ड हेल्थ जर्नलमा प्रकाशित एक अनुशन्धान अनुसार विवाह पछि थुप्रै म'हिला र पुरुषकाे ताैल निकै तेज रुपमा बढ्ने गरेकाे पाईन्छ। यस्तै अन्य अनुसन्धान अनुसार विवाहकाे ५ वर्ष भित्र करिब ८२ प्रतिशत जाेडिकाे ताैल ५ देखि १० किलाे सम्म बढ्ने गर्दछ। ‍‍हर्माेनल चेन्ज : अध्ययन अनुसार, विवाह पछि शरिरमा ह'र्माेनल परिवर्तन हुने गर्दछ। यसले गर्दा यु'वतिहरुकाे ताैल बढ्न थाल्छ। निन्द्रा नपुग्नु : विवाहअधि भन्दा पछि युवतिहरुकाे दैनिक समय तालिका फरक हुनेहुदा उनिहरु व्यस्त हुन थाल्छन। जसकाे कारण उनिहरुलाई निन्द्राकाे कम
हामिले प्राय सबै खानेकुराहरु एकै ठाँउमा मिसाएर खाने गर्छाै। किनकी कुनै चिज एकैसाथ मिसाएर खादा निकै स्वादिष्ट हुने गर्दछ। तर कुनै चिज एस्ताे पनि हुन्छ जुन एक आपसमा मिसाएर खानु हुदैन। मिसाएर खाएमा शरिरमा निकै गम्भिर असर पर्न सक्छ र स्वास्थमा गम्भिर समस्या देखा पर्छ। आज हामि तपाइले खाने-पिउने यस्ता केहि चिजहरुकाे बारेमा कुरा गर्दैछाै जुन सँगै खानु हुदैन। जस्ताे कि तपाईले दहीसँग कहिले पनि खट्टा खानु हुदैन। यि चिज सँगै खादा कहिले पनि पच्दैन जस्काे कारण पेट गडबड हुन सक्छ। दहि त्यसै पनि चिसाे हुने हुदा यस्लाई कुनै पनि ताताे चिजसँग खानु हुदैन। जस्तो कि, तपाईंले दहीसँग कहिल्यै पनि खट्टा खानुहुँदैन। यि चिज सँगै खाँदा पच्दैन जसको कारण पेट गडबढ हुन्छ। यस दहीले चिसो हुन्छ, त्यसैले यसलाई तातो कुनै पनि चिजसँग खानु हुँदैन। जस्तै धेरै मानिसहरु दहीसँग माछा खाने गर्दछन तर त्यसो गर्नु हुँदैन किनभने माछाले
यदि कोहि मानिसले आफूले आफैंलाई थप्पड हान्छ भने धेरैजसो मानिसले उसलाई मनोरोगी भएको ठान्दछन। तर कोरियाका जनताहरु यो कुरालाई मान्दैनन। यहाँको केहि मानिसहरु आफूले आफैंलाई थप्पड मार्ने गर्दछन। यसरी कसैले आफूले आफैंलाई थप्पड हानिरहेको छ भने कोरियामा यसलाई अनौठो रुपमा पनि लिइदैन। यसको कारण एकदम अनौठो र चाखलाग्दो रहेको छ। कोरियामा आफूले आफैंलाई थप्पड हान्नु यहाँको जनजिवनको एक हिस्सा हो। किन कोरियनहरु यस्तो गर्छन त? कोरियामा कसैले आफूले आफैंलाई थप्पड हान्नु भनेको आफैंलाई सजाय दिनु होइन। यो त महिलाहरुले गर्ने गरेको व्युटी ट्रिटमेन्ट हो। कोरियामा महिलाहरु आफ्नो शुन्दरतालाई निखार दिनका लागि आफैलाई थप्पड लगाउने गर्दछन। आफ्नो शुन्दरतालाई निखार दिने यसो गर्ने चलन खास गरि दक्षिण कोरियामा प्रख्यात रहेको छ। कोरियामा आफ्नो शुन्दरतासँग जोडिएका कैयौं यस्ता अनौठा तरिका तथा चलनहरु रहेका छन। त्यस मध्येको यो
कोरियाको के-पप, के-ड्रामा, अनि के-ब्युटिका कारण कोरियन संस्कृति र रहनसहन विश्वभर फैलिरहेको छ। कोरियन सं'स्कृति सँगसँगै कोरियन खानाहरु पनि विश्वभर प्र'ख्यात हुँदै गइरहेको छ। विश्वप्रसि'ध्द कोरियन फिल्म र ड्रामाहरुमा देखिएजस्तो कोरियन खानाहरु एकपटक खान चाहानेहरु विश्वभर धेरै नै हुने गर्दछन। केहि समयअघि एक कोरियन नागरिकले विदेशीहरुले सबैभन्दा धेरै मन पराउने तथा मन नप'राउने कोरियन खानेकुराहरुको लिस्ट तयार पारेका छन। उनले तयार पारेको यो लिष्ट अनला'ईन क'म्युनिटीमा पोष्ट गरेका थिए जसमा अरु थुप्रै कोरियन नागरिकहरुले कमेन्टका माध्यमबाट प्रतिकृ'या दिएका थिए। उक्त अनलाईन लिष्ट अनुसार ३४.८ प्रतिशत विदेशीहरुले कोरियाको फिबिमफाब (Bibimbap) मन पराउने गरेको पाइएको छ। यो खानेकुरा भातमा विभिन्न किसिमका तरकारी तथा धूलो खुर्सानीको सस इत्यादी हालेर तयार पारिन्छ। त्यसैगरी ३३.३ प्रतिशत विदेशीहरुले कोरियाको
हरिवंश आचार्य, वरिष्ठ कलाकार-म काठमाडौंको टंगाल गैरीधारामा जन्मिएको हुँ। त्यहाँ हाम्रो आफ्नै घर थियो। त्यही घरमा बाल्यकाल बित्यो। पछि, आमा बुवा वित्नुभयो। त्यो घरमा दाजुभाइको अंशबण्डा लाग्थ्यो। घर पनि पुरानो भइसकेको थियो । हामीले घर बिक्री गर्ने योजना बनायौं ।त्यो घर बिक्री गरेपछि केही पैसा आएको थियो। तर, चिनजानकै आफ्नै मान्छेले तिमीलाई नक्सालमा जग्गा दिन्छु भनेर पैसा लगेर खाइदियो। जग्गा दिएन। त्यो मान्छेसँग मेरो ११-१२ बर्षसम्म मुद्दा चल्यो। मैले मुद्दा जितेपछि पैसा फिर्ता पाएँ। तर, त्यो बेला मेरो पैसाको भ्यालू निकै कम भइसकेको थियो। जग्गाको मूल्य बढेको बढ्यौ थियो, तर पैसा जत्तिको त्यति। मैले फिर्ता पाएको पैसाले अब घरजग्गा आउने अवस्था रहेन। त्यो पैसा पनि मुद्दा मामिलामा उत्रिएर बल्लबल्ल पाइएको थियो। म आफ्नै घरमा जन्मिएको, आफ्नै घरम हुर्किएको मान्छे, एकाएक घरबार बिहीन हुनुपर्यो। घर नहुँदा
दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मून जे-इनले कुकुरको मासु खपतमा प्र'तिबन्ध लगाउने सकिने बताएका छन्। अधिकांश कोरियाली नागरिकले कहिल्यै कुकुरको मासु खाएका छैनन् हालैका वर्षहरूमा यसको माग घटिरहेको बताइएको छ। तर बर्सेनि दक्षिण कोरियामा १० लाखसम्म कुकुरहरू मासुका लागि मा'रिने अनुमान गरिन्छ। प्रधानमन्त्रीसँगको एउटा भेटघाटमा राष्ट्रपति मूनले प्र'तिबन्धबारे सोच्ने बेला भएको हो कि भनेर प्रश्न गरेका थिए। कुकुरलाई माया गर्ने भनेर चिनिएका राष्ट्रपतिले पूर्ण प्र'तिबन्धको बारेमा बोलेको भने यो पहिलो पटक हो। प्रधानमन्त्रीले अ'लप'त्र छोडिएका जनावरहरूको सु'र'क्षाका सम्बन्धमा गरिएका नयाँ व्यवस्थाहरूबारे जानकारी गराएपछि उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका थिए। दक्षिण कोरियामा कुकुर र बिरालोलाई क्रू'र तरिकाबाट मा'र्न नपाइने का'नुन छ तर त्यसको मासु खान प्र'ति'बन्धित छैन। तर हालैका वर्षहरूमा मानिसहरूले कुकुर पाल्न थाले
दक्षिण कोरियामा अब घरमा कुकुर पाल्न पनि दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ। यहि अक्टोबरबाट लागू हुने नयाँ नियमअनुसार दर्ता नगरी कुकुर पालेको खण्डमा अधिकतम ६ लाख वन सम्म जरिवाना हुन सक्नेछ। कोरियामा कृषि तथा खाध्य मन्त्रालयले आइतबार गरेको घोषणा अनुसार आउने अक्टोबर १ बाट कोरियाभर नयाँ नियम लागू गरिनेछ। अक्टोबर १ बाट घरपालुवा जनावरसम्बन्धि नयाँ नियमहरु लागू हुनेछ। अब कुकुर पाल्दा दर्ता गर्नुपर्ने तथा बाहिर सार्वजनिक स्थानमा लिएर हिँड्दा अपनाउनुपर्ने सावधानीका कुराहरु नयाँ नियममा आउनेछन। अनिवार्य दर्ता गर्नुपरेपछि जनावरका मालिकहरुमा आफ्ना पालुवा जनावरमाथिको दायित्व बोध हुने भएकाले वेवारिसे रुपमा छाडिने कुकुरहरुको संख्या घट्ने विश्वास लिइएको छ। अबदेखि कोरियामा २ महिना वा सोभन्दा बढि उमेरका कुकुरहरु नजिकैको स्थानिय सरकारका निकायहरुमा वा स्थानिय भेटेनरी क्लिनिकहरुमा गई दर्ता गर्न सकिनेछ। दर्ताभएपछि कु
दक्षिण कोरियामा विजुलीको भाउ बढ्ने भएको छ। कोरियाको सरकारबाट सन्चालित कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेशन (केप्को) ले विहिवार गरेको घोषणा अनुसार सन २०२१ को चौथो त्रैमासमा विजुलीको महशुल दर बढाउने तयारी गरिएको हो। विश्ववजारमा नै विध्युत उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न कच्चा पदार्थमा भएको मूल्य बृध्दिका कारण कोरियामा पनि महशुल दर बढाउनु परेको केप्कोले बताएको छ। अहिले कोरियामा दिइरहेको प्रतिकिलोवाट ३ वन छुट अब बाट हटाइने भएको छ। यो छुट चालु बर्षको पहिलो त्रैमासबाट दिन सुरु गरिएको थियो। यसले अब हरेक घर परिवारको विध्युत महशुल रकम बढ्नेछ। अब लागू हुने नयाँ दर अनुसार ४ जना सदस्य रहेको एउटा सामान्य परिवारको मासिक विध्युत महशुल करिब १ हजार ५० वनले बढ्नेछ। दक्षिण कोरियामा सन २०१३ को नोभेम्बर पछि पहिलो पटक बिध्यु महशुल दर बढाउन लागिएको हो। कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेशनले आफ्नो नाफा समायोजनक
दक्षिण कोरियामा कुकुरको मा'सु खाने गरिन्छ। कोरियनहरु कुकुरको मा'सु खान मन पराउँछन। यहाँ यसको मूल्य पनि बढि छ। कोरियामा घर वरपर साँ'ङ्लोले बाँ'धेर कुकुर पालेको पनि देख्न सकिन्छ। तर हालसालै गरिएको एक सर्वेक्ष'णमा दाम्लो वा सा'ङ्लोले बाँ'धेर कुकुर पाल्न नहुने गरी का'नुन ल्याउनुपर्ने धेरै कोरियनहरुको मा'ग रहेको पाइएको छ। यसरी कु'कुर तथा अन्य ज'नावर पाल्ने च'लनलाई का'नुनी रुपमा ब'न्देज लगाउनुपर्ने उनिहरुको राय रहेको छ। प्राइभेट एनि'मल वेलफेयर रि'सर्च इन्स्टिच्युटले गरेको रि'सर्च अनुसार धेरै कोरियनहरु घरपालु'वा जना'वरहरुको हक हितमा का'नुन बन्नुपर्ने पक्षमा रहेको पाइएको छ। यस संस्थाले देशभरका १७ वटा शहरका करिब २ हजार युवाहरुमा गरेको सर्वेक्ष'णमा यस्तो नतिजा देखिएको हो। सर्वेका अनुसार ८२.५ प्रतिशत कोरियनहरु जना'वरलाई दा'म्लो वा साँ'ङ्लोले बाँधेर पाल्न नहुने पक्षमा रहेका छन। त्यसैगरी धेरैजसो